Fiber Optical Rinofambisa Manufacturers & Suppliers | China Fiber Optical Rinofambisa Fekitori
Mini Optical Rinofambisa (ZTX1310M / ZTX1550M)
Tsananguro yechigadzirwa CATV Model ZTX1310M / ZTX1550M Transmitter chiteshi CATV VSB / AM vhidhiyo yekubatanidza inopa mamiriro-e-iyo-mhinduro mhinduro yepamusoro-soro CATV kutapurirana. Iyo Model ZTX1310M / ZTX1550M inopa yakasarudzika analogwidth bandwidth kubva ku45 kusvika 1000MHz inobvumidza kutapurirana kweese sub-bhendi, yakaderera-bhendi, FM, yepakati-bhendi, uye epamusoro-bhendi chiteshi. Iyi ficha inobvumira iyo system kuendesa mutengi yakagadzirirwa vhidhiyo masevhisi. Mukubatana neVCR, camcorder, kana tambo terevhizheni feed, iyo modhi ZTX1310M / ZT ...
Tsananguro yechigadzirwa ZTX1800 ndeye mhando yeiyo yepamusoro-yekuita 1550nm yekunze modulation Optical transmitter ine yakakwira-kuita mbiri switching magetsi magetsi. Iyo yese yeyuniti mwenje sosi inotora yakamanikana bandwidth, yakaderera ruzha, inoenderera wave wave DFB laser, inova inobatsira kudzora simba rekupararira. Nekuda kweyepasi rose mhando yekugamuchirwa kwezvinhu zvakakosha uye yedu kambani system optimization yekudzora tekinoroji, SMNP network kudzora tekinoroji, muchina wehunyanzvi p ...
1310nm Fiber Optical Rinofambisa (ZTX1310)
Tsananguro yechigadzirwa ZTX1310 akateedzana 1310nm Optical transmitter iri mhando yepamusoro mhando yekutepfenyurisa ine AGC basa. Kureba kwekutepfenyura iIU, inogona kuiswa pane iyo 19 ”furemu zviri nyore. Midziyo mikuru inotora AOI, EXSTON kana Ortel DFB yakaderera ruzha iyo ine thermoelectric firiji, inoenderera wave wave. Yese hunyanzvi hwekuita mareferenzi anosvika kune akafanana akaunzwa mukati mezvigadzirwa zvemhando yepamusoro, achipa mhando kureba kutapurirana kwemifananidzo, zviyero kana compress ...
1310nm Optical Relay Chiteshi (ZTX1310R)
Zvimiro 1.Iyo inonyanya kugadzirirwa kuwedzerwa kweiyo coaxial network. Iyo ine maviri mabasa: kugashira basa, kutsiva iyo yemaziso inogamuchira; kuendesa basa, rinobuda simba 2 ~ 4mW, iro rinogona kushandiswa kushandisa 1 ~ 4 Optical node. 3.Kushandisa kwekunze, dzimba dzakanaka-dzinoratidza mvura, dzinogona kushanda mukutonhora kwakanyanya se -45 ° C ~ + 85. Technical paramende Item Unit Parameter Optical Mugamuchiri chikamu Gamuchira Optical Simba dBm -6 ~ + 2 (chaiwo -1) Kuburitsa chiteshi nhamba 1/1 kana 2/0 ...
Kunze optical transmitter (ZTX1310W)
Zviratidzo 1. Inonyanya kugadzirirwa kuwedzerwa kwecoaxial network. 2.Iinogona kushanda seiri maviri node uye diki transmitter kushandisa 1 ~ 4 node. 3. Mhando yekunze, inogona kushanda -45 ~ + 85 ℃. Parameter Magadzirirwo Maparamende Optical Kugamuchira Kuburitsa Nha. 1/1/2 Kushanda Bandwidth (MHz) 47 ~ 862 Wavelength (nm) 1310/1550 Homo Noise Yazvino 7 Input Simba (dBm) -6 ~ +2 Yakajairika -1 Fibheri Connetor FC / APC Kana SC / UPC Optical Return Loss (dB) ≥40 Kudzoka Kurasikirwa RF (dB) ≥16 Unflatne ...
1550nm Yemukati Kusiyanisa Inzwi Optical Rinofambisa (ZTX1550)
Tsananguro yechigadzirwa ZTX1550 dzakateedzana 1550nm Optical transmitter ndeye yakajairwa mhando yeCATV optical transmitter. Kureba kwekutepfenyura iIU, inogona kuiswa pane iyo 19 ”furemu zviri nyore. Iwo makuru ekushandisa anotora Ortel, MITSUBISHI DFB yakaderera ruzha iyo ine thermoelectric firiji, inoenderera wave wave. Iyo yese yehunyanzvi yekuita indekisi inosvika kune yakafanana inotengwa kunze kwechiyero chiyero, ichipa mhando kureba kutapurirana kwemifananidzo, zviyero kana yakadzvanywa digital chiratidzo ...